IiTekhnoloji zePliant Technology zibonisa iNkqubo yeCntCom engenazingcingo ye-Intanethi kwi-IBC 2019 -i-NAB bonisa iiNdaba ngoSasazo lweBeat, Usasazo lwaseburhulumenteni lweNAB Show-NAB BONISA LULA
ikhaya » iindaba » IiTekhnoloji zePliant Technologies zaSasaza i-CrewCom ye-Wireless Intercom System kwi-IBC 2019
I-AMSTERDAM, AUGUST 13, 2019 - Technologies Pliant izakubonisa uhlaziyo lwakutsha nje lwefirmware yenkqubo yayo ye-CrewCom engenazingcingo kunye ne-SmartBoom yechungechunge lama-headset e-IBC 2019 (Yima 10.F29). IPliant iya kubonisa imveliso yokufikelela entsha kubandakanya iDrop-in Charger yayo entsha, i-Fibre Hub, kunye ne-adaptha yesini yeFleXLR, ebonelela ngesisombululo esikhethekileyo kubathengi abasebenzisa i-headset yelifa kunye neCrewCom okanye ezinye izixhobo ze-4-pin.
“KwiTekhnoloji yePliant, bekusoloko kuyinto ephambili ukuyila iindlela zonxibelelwano zonxibelelwano ezinobuhlobo kubathengi,” utshilo uGary Rosen, uSekela Mongameli wentengiso yehlabathi kwiPliant Technologies. “Ngokuma komhlaba okuhlala kutshintsha kwe-RF kwihlabathi liphela, iimveliso zePliant kufuneka ziqhubeke ziphenduka ukuze zifezekise iimfuno zemeko ezahlukeneyo zemveliso. Iinkqubo zohlaziyo lwefirmware ezikhutshelweyo zibonelela ngokusasaza kunye noludwe lweenkqubo zokuvelisa kunye nezisombululo ezinokutshintshwa ezilungele phantse nayiphi na imfuno enxulumene ne-intercom. Kwi-IBC 2019, ecaleni kwenkqubo yeCrewCom, sonwabile sibonisa izinto zethu ezintsha, kubandakanya iFleXLR - isisombululo esincinci somnxibelelanisi wentloko esinamandla amakhulu. "
Uhlaziyo olusanda kukhutshwa lweCrewCom firmware lubandakanya ukuphuculwa kwenkqubo kunye nokufakwa kweemodeli ezintsha ze-Oceania 900MHz. Inkampani kutshanje ihlaziye i-SmartBoom LITE yayo kunye nee-headset ze-Pro ukunikezela ngomgangatho ophuculweyo kunye nentuthuzelo. I-SmartBoom Lite ye-single Earset eyandisiweyo (i-PHS-SB11L) ifaka umbhobho oshenxisa ingxolo onamandla wokuphendula isandi esiphindaphindayo nempendulo ebanzi evakalayo. Isithethi esiphuculweyo sinezimpendulo ezibanzi eziphindaphindiweyo kunye nokunciphisa ukugqwetha. Ikwafaka nephedi yendlebe ye-foam ehlaziyiweyo yokuqina okuzinzileyo. Ii-headsets ze-SmartBoom Pro, ezinikezelwa kuzo zombini (i-PHS-SB110) kunye nendlebe ezimbini (i-PHS-SB210), ziyafumaneka kwiindawo ezinokupheliswa kwaye zibonise ukubiyelwa kwezindlu ezikwim mic kunye nendawo yomoya yokuncitshiswa kwengxolo enkulu.
Umgca kaPliant weefowuni zokunxibelelana ubandakanya into elula yokuguqulela imakrofoni kwaye yenzelwe ngokukodwa ukonwaba, ukuguquguquka, kunye nokuqina njengoko kufuneka kwindawo ezinobuchule. Zombini ii-SmartBoom LITE kunye nee-SmartBoom PRO Headsets ziyafumaneka kwi-4-Pin Female, 5-Pin Indoda, engenakuchazwa, kunye nezihlanganisi ezibini ze3.5mm.
I-Drop-in Charger entsha (i-PBT-RC-66) ivumela iipakethi zeradiyo ezintandathu (i-RPs) kunye neebhetri ezintandathu ezongeziweyo kwisixhobo esinye kulawulo lwebhetri olusebenzayo kwindawo. I-CrewCom Fibre Hub (CHB-8F) yandisa amandla enkqubo kwinkqubo efanelekileyo yokuhanjiswa ngokuvumela ukuya kuthi ga kwisibhozo zonxibelelwano kuqhagamshelo olusekwe kumgaqo-siseko we-SFP olunikezelwa ngamazibuko efomathi enye yendlela kunye ne-RJ-45 izibuko zobhedu ukuya kwisimo esikhoyo ICrewNet™ Unxibelelwano. Ukongezwa kwecwecwe entsha yesini ye-compact yeFleXLR kunika abasebenzisi ukuguquguquka kokunxibelelanisa izixhobo zentloko kwizixhobo ezine4- kunye ne-5-pin XLRs, ezinjengeepakethe zerediyo yeCrewCom okanye iiyunithi zokulawula, ngelixa zivumela abathengi ukuba bakhethe kuluhlu olukhulu oluyahambelana. izixhobo zentloko.
Olunye ulwazi malunga ne-Pliant Technologies lufumaneka www.plianttechnologies.com.
Malunga nezobuchwepheshe bePliant
I-Pliant iyinkonzo ehamba phambili yezisombululo ze-intercom ezingenazintambo ezivela kwizinto ezibonakalayo ezingaphandle kwebhokisi kwiinkalo ezinkulu zamashishini afana nokusasazwa, ukuvakala komsindo, indawo yokuzonwabisa kunye nezinye ezininzi. Njengoko ulwahlulo oluqeqeshiweyo lweCocachComm, i-Pliant iyayaziwa kakhulu kwiSiphepho seNguqulelo® inkqubo ye-intercom engenazintambo, esetyenziswe imihla ngemihla kumazwe angama-40. I-folly yinxalenye yembali yenkampani ebanzi yokubonelela izisombululo ze-intercom kwimarike yezemidlalo kunye nezobugcisa kwaye iqukethe iqela labasebenzi bezoshishino abazinikezele kwinkcubeko yenkampani yokutsha kunye nenkonzo. Ukuphuhliswa kobuchwepheshe bezonxibelelwano ezinokwethenjelwa, obuzinzileyo, kunye nokulula ukuyisebenzisa kuye kwenza uCoachComm inkokheli yehlabathi kwiinkomfa ezibalulekileyo zonxibelelwano.
Isandi sokuqonda kunye noJosé Frías - Septemba 19, 2019
Ukubonakala kweTV kuboniswa kweNethiwekhi yeLatency yayo ephantsi eneZitishi eziPhakamileyo zeMidlalo ye-IBC 2019 - Septemba 10, 2019
I-OK Go's kaDan Konopka's eziHlanganisa 'i-SoundBetter' eneeNkqubo zeKRK - Septemba 10, 2019
2015 ukunciphisa kwebhitrate Injineli yokusasaza Ukusasazwa kwezobunjineli Digital Nirvana UGraham Chapman uVikelelwa kuMhleli H264 / H265 eye HDR / WCG HEVC HEVC / AVC IBC IBC Amsterdam immersive isovideo JCT-VC kuhlolwa kweendaba ukunciphisa ingxolo Technologies Pliant Iintetho kunye nemisrya Umxholo ophantsi UHD / 4K / HD viarte Injini yeVidiyo Warsaw	2019-08-13
Previous: Umvelisi weVidiyo
next: IfilimuLight ibonelela ngombala kwiNqanaba kwi-IBC2019